ezaposwa ngomhla 05 / 30 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Namhlanje, abaninzi abaqulunqa umzimba bakhetha ukukhetha i-homebrew steroids ngenjongo yokwandisa ubunzima babo bomzimba. Nandrolone Decanoate, eyaziwa njenge-DECA, ethengiswa phantsi kwegama le-brand DECA-Durabolin, yenye ye-steroids enamandla enika iziphumo ezimnandi xa i-homebrewed ilungile. Ukuba unomtsha kwishishini, usenokuzibuza ukuba yiyiphi i-Deca Durabolin kunye nento enokuyenza ngayo. Nazi ezinye zeempawu ze-Nandrolone Decanoate (DECA) ezibeka bucala kwabanye.
Nandrolone Decanoate (DECA) i-steroid esebenza ngokukhawuleza, kwaye oku kwenza ukuba kuvelele. Iyintoni inzuzo yokusebenzisa i-steroid epholileyo? Sekude isiqingatha-ubomi, ixesha elide liza kuthatha i-steroid ukuba ihambe emzimbeni. Kwakhona, oku kuthetha ukuba i-Nandrolone Decanoate dosayo ayifanele ukuba ihlale ihlala. Kuphela kufuneka ufumane injection emva kweeveki ezintathu, ngokungafani nabanye onokufuna ukufumana i-jab ngeveki nganye.
Akukho intlungu edibeneyo kunye nokusetyenziswa kweNandrolone Decanoate kuba iqinisekisa ukuba ihlala iphilile.
Inyathelo 1: Ukulinganisa i-Nandrolone Decanoate powder kwi-beaker.
Xa kuziwa ekuthathe i-steroids, kukho iintlobo ezimbini zabantu; abo bathengayo i-Nandrolone Decanoate ethengiswayo kunye nalabo abakhetha ukuwasela ekhaya ukusuka kwi-Nandrolone Decanoate eluhlaza. Xa usebenzisa zombini, kunomgomo omnye kuphela; ukudala umzimba obonakala bhetele.
Ukuba unokukhetha ukotya ekhaya i-steroid ngokwakho, kufuneka ukuba ubuncinane uzame ukwenza okulungileyo. Ngokulandela iresiphi yeNandrolone Decanoate enikezelwe kuyo indlela yokwenza iDaa, uya kufumana iziphumo ezigqibeleleyo. Ukugqithisa okanye ukusebenzisa isixa esincinci se-solvents okanye I-Nandrolone Decanoate powder inokuchaphazela umgangatho we-steroid yakho.
Enyanisweni, kunye nezixhobo ezifanelekileyo kunye nezithako, unakho u-homebrew u-Nandrolone Decanoate kwaye uqaphele ukuba unakho ukwakha umzimba.
Indlela yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe yokudibanisa i-Trenbolone Inanthate Powder 2019 I-10 edume kakhulu kwi-Anabolic Steroids Raws Material